XOG: Waqtiga Uu Dhacayo Kulanka 2aad Ee Madrid Derby Oo Sababi Kara In Real Ay Ka Harto CL [Sidee] %
Xiriirka kubada cagta wadanka Spain, ee La Liga ayaa waxay si rasmi ah ugu dhawaaqay waqtiga la dheeli doono kulanka labaad ee Madrid Derby, ee xili ciyaareedkan, waxaana loo mudeeyay in la dheelo 8-da bisha April, oo ku beegan maalin Axad ah.
Wali ma aysan sheegin xiriirku saacadda kulankaan la baasan doono ama uu ka bilaabmi doono caasimada wadanka Spain ee Madrid.
Atletico Madrid iyo Real Madrid, oo uu kulanka udhaxeeyo ayaa hada ka qeyb galaya tartamada Champions League iyo Europe League, waxaana Madrid ay xiligaas dheeleysaa lugta labaad ee wareega 8da halka Atletico ay iyadana lamid tahay.
Laakiin, Atletico wali ma aysan xaqiijin inay usoo baxday wareegaas, maadaama ay la balansan tahay Lokomotiv Moscow, habeenka Khamiista, balse Real waa ay xaqiijisay.
Sida caadiga ah, lugta labaad ee wareega Sideed dhamaadka Champions League, wuxuu dhici doonaa Sabti oo ah bilowgo Isbuuca, taasoo dhibaato ku ah Madrid, maxaa yeelay Axadda waxay dheeleysaa kulan adag oo ay Atletico ka horjeedo.
Los Blancos ayaa waxay arrintaan ay kala hadashay maamulka UEFA, si ugu yaraan wax looga bedalo, waxaana illo wareedyo lagu kalsoon yahay ay usheegeen MARCA, inay codseen masuuliyiinta Madrid, in looga dhigo maalinta Arbacadda ah.
Balse, wali ma cada in la aqbalay dalabka Madrid, iyadoona hadii ay dhacdo in Real Madrid ay dheesho Sabtida misana Axada uu sugayo kulan kale oo adag ay ciyaarto, uu halis gelin karo nolashooda Champions League ama kasii mid ahaanshaha tartanka.
Sababta ayaa ah in xiligaas ay suuragal tahay in horyaalku uu xiiso lahaado inkastoo ay hada Barcelona, hogaanka hayso, waxaana dhici karta labo-daran-mid-dooro, oo maxaa yeelay Champions League, ma ahan tartan ay Madrid, ka samri karto.
Sikastaba, xiriirada kubada cagta ee Spain [La Liga] iyo kan Yurub [UEFA] ayaa waxaa looga fadhiyaa inay xaliyeen arrintaan kadib wada hadalo badan, iyadoona aysan marnaba suuragal noqon karin in dib loo dhigi labadda kulan midkoodna.
Madrid DerbyReal Madrid vs Atletico MadridUCL